anumanu na osisi | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Nchịkọta: anụmanụ na osisi
Nlekọta na mmezi nke Ịgba ngwa
Ihe na 28.10.2018
Africa Na - emepụta ngba - otu n'ime ihe kachasị elu n'ụwa. Ogologo ugbo a nwere ike iru 30, lee Ebe obibi ndi mmadu - obodo nke nwere ebe okpomọkụ. Ọ bụrụ na nwa amaala ...
Ịnọgide na-emepụta ngwa ngwa n'ụlọ
Nkịta, nkịta na obere òké bụ anụ ụlọ. A na-agbanye ha n'ụlọ na ụlọ, n'agbanyeghị ụdị ejiji. Ma ejiji na-egosi Akhatin na ndị ọzọ anu ulo ...
Achatina snail - anụ ụlọ sitere na Africa - nlekọta, mmepụta, mmezi
Ihe na 28.10.2018 28.10.2018
Ọ bụrụ na ị ga-etinye oge dị ukwuu na-arụ ọrụ, ma ịchọrọ ịnweta ọ dịkarịa ala obere anụ ụlọ n'ụlọ. Ọ bụrụ na ọdịnaya nke nkịta bụ "okomoko na-enweghị atụ," ụdị nsị niile yiri ka ọ bụ "banal." Mgbe ị chọrọ ...
Ebee ka eucalyptus nọ na Russia?
Ebee ka eucalyptus nọ na Russia? Ọ na-emekwa n'ezie na anyị eto? E nwere ọtụtụ n'ime ha n'Australia. Ha na-etolite n'ebe ahụ. Na ebe a, ọ bụrụ na e nwere, mgbe ahụ na ụfọdụ botanical garden, it should be ...
Enwere ike idowe ụlọ nke nwamba na nnụnụ n'otu oge ahụ?
Enwere ike idowe ụlọ nke nwamba na nnụnụ n'otu oge ahụ? Ruo ọtụtụ afọ, anyị nwere canary na onu na pusi. Ọ naghị emekpa ya ahụ, mana ọ na-anọdụ ala n'ala ...
Kedu ụdị ahụhụ na-enweghị nchịkọta dị iche iche nwere ike iji ọsọ na-agba ọsọ n'ala n'ala ụlọ?
Kedu ụdị ahụhụ na-enweghị nchịkọta dị iche iche nwere ike iji ọsọ na-agba ọsọ n'ala n'ala ụlọ? Enwere ube ojii. Ha dị ka anụ ọhịa nkịtị, nwa na ntakịrị onwunwu. N'adịghị ka ọ dị na-acha ọbara ọbara na ...
Kedu onye na-eme njem?
Ọnye na-bụ Fenech? Anụmanụ a bụ anụ ọhịa tojurula n’ọzara. Anụmanụ dị ịtụnanya nke nwere ike ịdị ndụ na ọkụ, yana ịchụ nta. Nnukwu ntị bụ ụdị ndị na - achọgharị ihe, na - eburu obere mmegharị nke nri nri ọdịnihu ...
Gini mere eji acha ọcha charo oku?
Kedu ihe kpatara eji akpọ ụcha ọcha? A na-akpọ ero Boletus dị ọcha maka agba ya ọkụ ọ bụrụgodị na ọ kpọrọchaa. Ala ala nke olu olu nwere agba acha acha, elu ya na-acha aja aja. Arọ ọcha bụ eze…
Gini mere ogbugba mmiri ji bristle?
Gini mere ogbugba mmiri ji bristle? Okwute dị mkpa maka ụwa maka otu anụ akpụkpọ ahụ bụ maka anyị, ọ bụ nchebe nke ahụ site na mpụga gburugburu ebe obibi, oke nkuru nke ikpuru ezuru ...
Kedu ka esi akpọ pusi Peasia?
Kedu ka esi akpọ pusi Peasia? Mgbe ị na-ahọrọ aha, ọ dị mkpa ịhọrọ ụfọdụ mkpakọrịta nwere ike ijikọ gị dị ka onye nwe ya na anụ ụlọ gị, ma ọ bụ malite site na mmụọ dị mkpa nke inye aha aha, ...
Kedu akụkụ a chọrọ maka mkpụrụ ndụ nke ihe niile dị ndụ?
Kedu ihe achọrọ maka mkpụrụ ndụ nke ihe niile dị ndụ? Ruo n’icheta ihe n’usoro agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ, sel ahụ nwere ọnụọgụ abụọ. Isi a, n'aka nke ya, nwere DNA. Shei na-akpọ mkpo. Ihe cytoplasm - ...
Gịnị mere ehi ji mkpa mpi?
Gịnị kpatara ehi ji nwee mpi? Echere m na e nyere mpi ehi site n'okike na ebe mbụ iji chebe onwe ha na ndị ha hụrụ n'anya tupu ihe egwu na onye iro, na nke abụọ, mgbanwe nke cows nwere ike inye mpi ...
Gịnị mere nkịta ji jide òké n'okporo ámá ma webata ya n'ụlọ?
Gịnị mere nkịta ji jide òké n'okporo ámá ma webata ya n'ụlọ? N'izi okwu, ọ na-eburu ya nna ya ukwu. Nke ahụ bụ, onye na-azụ ya. Nke a bụ ihe nkịtị, ihe ngosi nke nrubeisi ruo n'ókè ụfọdụ. Ya mere ...
Ntak emi ẹkedọhọde ke idiọkn̄kpọ?
N'ihi gịnị ka ube ji bụrụ ihe nnọchianya nke ịdị ogologo ndụ? Ikekwe nke a na-ezo aka na ọdịnala China (pears bụ osisi dị ogologo, toro ruo 100 afọ), na mba ndị ọzọ ọ nwere ihe atụ dị iche. Na Gris oge ochie, ube ...
Ndi nkịta nwere ike ibuso nwoke na nkita agha?
Ndi nkịta nwere ike ibuso nwoke na nkita agha? Fox bu obi ojoo, o doro anya na o choghi nje. Enweghi uzo ozo, mmuo ojoo adighi abanye na nkita ...
Gini mere nkịta na-adighi adi uto?
Gini mere nkịta na-adighi adi uto? Dị ka ndị mmadụ, ụtọ na-enwe mmetụta ọjọọ na ezé nkịta. Sugar na-ewepu calcium site na ezé, ha na-aghọ nke na-emebi emebi, mgbe ahụ, nje bacteria na-etinye aka na-amalite ọrụ ha, mepụta ...
Kedu ihe a kụrụ n'ime osisi na ebe ifuru?
Gịnị ka a kpụrụ n’ime osisi n’ọnọdụ ya ifuru? Dị ka o kwesịrị ịdị, nwa ebu n'afọ na-aga n’ihu, ma ọ bụrụ na njikọta nwoke na nwanyị na-aga nke ọma. Echere m na ndị a bụ mkpụrụ, (ọ bụrụ na ndị a bụ ifuru, dịka ọmụmaatụ), igbe nwere mkpụrụ nke enwere ike itozu ma ...
Kedu otu esi kụziere kpala ka ị gbadata n'azụ ya n'ụlọ mposi?
Kedu otu esi kụziere kpala ka ị gbadata n'azụ ya n'ụlọ mposi? Ọ ga-amasị m ka cat na-aga n'ụlọ mposi ma saa onwe ya n'azụ ya, mgbe ahụ, agaghị m ehichaa akwa ahụ, ...
Gini mere nwamba na-eweta umu oke n'ulo?
Gini mere nwamba na-eweta umu oke n'ulo? Ndị nwamba na-abata n'ime ụlọ ahụ ọ bụghị naanị na ụmụ oke na ọkụkọ ndị ọzọ, kamakwa ozu nke oke, ọ na-abụrịrịrịrị ọkara eri. Ihe ngosi ahụ bụ ihe arụ, mana pusi ...
Otu esi ehicha ala na mmanya vine, nke mere na nkịta adịghị emerụ?
Otu esi ehicha ala na mmanya vine, nke mere na nkịta adịghị emerụ? Kasị mma na amonia, ísì siri ike na ya. Echere m na mmanya ga-esi ísì ụtọ. Mmanya agaghị agbanye nkịta ka ọ ghara ịkwa iko! ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,683.